HomeWararka MaantaGuushii Ingiriiska Ee Koobka Adduunka, Ciyaartooyada Ismuujisay Iyo Damaashaad Ka Bilaabmay England
11/06/2017 Abdiwahab Ahmed
Xulka kubadda cagta waddanka Ingiriiska ayaa ku guuleystay koobka adduunka ee dhallinyarada ay da’doodu ka hoosayso 20 jirka, kaddib markii ay 1-0 kaga badiyeen Venezuela oo ay jilbaha isku dhigeen ciyaar naf-bax ah oo rikoodhe la khasaariyey.
Koobka Adduunka da’yarta oo lagu qabtay waddanka Kuuriyada Koonfureed, ayaa waxay ciyaarta finalku bilaabantay duhurkii wakhtiga bariga Afrika, taas oo ay dad badan ka daawanayeen shabakadda ciyaaraha ee Cadalool, waxaana bilowgiiba ay labada waddan soo bandhigeen hibada ay da’yartoodu u leedahay in xattaa loo xidho funaanadda ciyaaryahannada waaweyn oo ay ku metelaan tartamada waaweyn.
Koobkan oo noqonaya markii labaad oo xul Ingiriis ah uu ku guuleysto Koob adduun, iyadoo sannadkii 1966-kii uu xulka waaweynka England qaaday koobka, ayaa waxa dalkaas ka bilowday damaashaad, iyagoo ku dhowaaqayay inay ka baxeen abaar 51 sannadood ka haysatay koobka adduunka.
Weeraryahanka Everton ee Dominic Calvert-Lewin ayaa xulka Ingiriiska qaybta hore u dhaliyey goolka kaliya ee ciyaarta ka hadhsay, hase yeeshee, garsooraha ciyaarta hayey ayaa rikoodhe u dhigay Venezuela markii uu Kyle Walker-Peters khalad ku galay Adalberto Penaranda oo Malaga u ciyaara, kaas oo isaga loo doortay inuu goolka ku laagto kubbadda, balse goolhaye Freddie Woodman ka badbaadiyey, ciyaartana ku hayey inay ahaato 1-0 illaa dhamaadkii.
Dhallinyarada Ingiriisku, waxay hore ugu guuleysteen sannadihii 2010 iyo 2014 Koobka Qaramada Yurub, waxaana laba kale raacsaday 21 jirrada oo 1982 iyo 1984 hantiyey.
Markii ay ugu fiicnaayeen da’yarta 20 jirrada Ingiriisku ee ay ka qayb-galaan Koobka Adduunka waxay ahayd sannadkii 1993-kii, waxaanay galeen kaalinta saddexaad.
Lix ka mid ah ciyaaryahannadii koobka Adduunka maanta u qaaday Ingiriisku, waxay ka mid ahaayeen ciyaartoygii sannadkii 2014 ku guuleystay Koobka Qaramada Yurub, waxaanay magacyadoodu kala yihiin Woodman oo goolka hayey, una ciyaara Newcastle United, Jonjoe Kenny, Dominic Solanke oo Liverpool ah, iyo kabtan Lewis Cook oo intuba safka koowaad ahaa. waxa kale oo ku jiray Dael Fry iyo Adam Armstrong oo kaydka fadhiyey.
Ciyaaryahan Tikidho Bilaash Ah Ugu Deeqay Dadka Bilaa Camalka Ah
Zidane Oo Hadal Murti Ah Kaga Jawaabay Guul la’aantii Villarreal
Conte Oo Si Adag U Weeraray Sergio Aguero
10/12/2016 Abdiwahab Ahmed